Akụkọ - Pdị mmebi Piston na ihe kpatara mmebi hydraulic?
1. formsdị isi nke mmebi piston:
(1) Ihu ọkọ;
(2) A gbajiri pistin;
(3) Cracks na chipping emee
2.Gịnị bụ ihe na-akpata mmebi piston?
(1) Mmanụ hydraulic adịghị ọcha
Ọ bụrụ na agwakọtara mmanụ na adịghị ọcha, ozugbo adịghị ọcha ndị a na-abanye na ọdịiche dị n'etiti piston na cylinder, ọ ga-eme ka piston ahụ ghaa. Nrụrụ e guzobere na nke a nwere njirimara ndị a: n'ozuzu a ga-enwe oghere nwere omimi nke ihe karịrị 0.1mm, ọnụ ọgụgụ ahụ dịkwa obere, ogologo ya dịkwa ka akara nke piston. A dụrụ ndị ahịa ọdụ ka ha na-enyocha ma na-edochi mmanụ hydraulic nke excavator
(2) Oghere dị n’etiti piston na cylinder pere mpe
Ọnọdụ a na-adịkarị mgbe a gbanwere pistin ọhụrụ. Ọ bụrụ na ọdịiche dị n'etiti piston na cylinder pere mpe, ọ dị mfe ịkpata nsogbu mgbe ọdịiche ahụ gbanwere ka ọnọdụ mmanụ na-arị elu n'oge ọrụ. Njirimara ikpe ya bu: omimi nke akara a na-adighi emighị emi, ebe buru ibu, ogologo ya dikwa nha nke piston. A na-atụ aro ka onye ahịa ahụ chọta onye ọkachamara ọkachamara iji dochie ya, na oghere ndidi ga-adị n'etiti oke kwesịrị ekwesị
(3) Ike nke pistin na cylinder dị ala
A na-etinye piston ahụ n'èzí mgbe ọ na-agagharị, na ike nke elu nke piston na cylinder ahụ dị ala, nke na-adịkarị njọ. Ihe e ji mara ya bụ: omimi miri emi na nnukwu mpaghara
(4) Lubrication usoro ọdịda
A na-arụ ọrụ hydraulic breaker pistin lubrication nke na-ezighị ezi, a naghị emepụta mgbanaka piston zuru oke, ọ dịghịkwa ihe nkiri mmanụ na-echebe, nke na-akpata esemokwu akọrọ, nke na-eme ka mgbanaka hydraulic ahụ na-emebi
ọ bụrụ na pistin mebiri emebi, biko dochie ya pistin ọhụrụ ozugbo.